Taliye u eedeysnaa dilkii guddoomiyhii degmada Hodan oo la sii daayay | KEYDMEDIA ONLINE
Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta xibsiga ka sii deysay qaar ka mid ah raggii u xirnaa kiiska dilkii AUN gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xabsiga ka sii deysay mid ka mid ah Taliyaashii u xirnaa dilkii Allaha u naxariistee Guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhega Juun oo Muqdisho lagu dilay 21-kii bishii koobaad ee sanadkan.
Taliyihii saldhigga Booliska degmada Waaberi Mooshin iyo labbo askari oo kale, ayaa maanta laga sii daayay xabsiga, halka xabsi dhexe loo gudbiyay taliyihii saldhigga Booliska Howlwadaag Shuceyb iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa.
Guddigii loo xil saray baarista kiiska dilkii AUN Guddoomiyihii degmada Hodan ayaa sheegay in dilku ahaa shil aan ula kac ahayn, iyaga oo aaan keenin wax caddeyn ah oo lagu qanci karo,
Kiiskaa oo ay ku sheegeen mid aan ku tala-gal ahayn, waxa ay dusaha ka saareen taliyihii saldhigga Booliska Howlwadaag Shuceyb oo Todobo ruux oo kale.
Labbadaan taliye ee mid ka mid ah la sii daayay ayaa ku eedeysnaa dilkii Allaha u naxariistee Dhagajuun oo xilli habeen ah rasaas la la dhacay gaari uu saarnaa oo marayay inta u dhaxeysa Isgoysyada Aadan Cadde iyo Howlwadaag.
Guddiga loo xil saaray barista kiiskaan oo ka kooban Xubno isku jira Xeer-ilaalinta Ciidanka, Booliska iyo NISA, ayaa sida muuqata soo gaba gabeeyay baaris qaadatay 40 cisho, lamana oga sida loogu qanci doono warbixintooda.